कोरोना संक्रमित काकालाई भतिजले राप्ती नदी फ्याक्दै गरेको भिडियो भाइरल [ भिडियोसहित ]
कोरोना संक्रमित का’कालाई भति’जले रा’प्ती न’दी फ्या’क्दै ग’रेको भिडियो भाइरल [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं । राप्ती न’दीमा ला’श फा’ल्दै ग’रेको एक भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा ड’रला’ग्दो तरिकाले भाइरल भएको छ ।
भारत, उत्तर प्रदेशको बलरामपुर जिल्लामा मा’नव’तालाई गि’ज्याउने ए’क दृश्य देखिएको छ ।
त्यहाँ कोरोना संक्रमित काकालाई भतिजले शनिबार दिउँसो राप्ती न’दीमा अन्य एक जना व्यक्तिको स’हयोगमा फ्याँ’केको खबर आएको छ ।
ला’श न’दीमा ‘फ्याँ’क्दै ग’रेको भि’डियो भा’इरल भएपछि अधिकारीहरूले उक्त घटनालाई लिएर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।
लाइभ हिन्दुस्तानका अनुसार वृद्ध एल टु अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
उनको शुक्रबार अबेर मृत्यु भयो । शनिबार दिउँसो अ’न्त्ये’ष्टि’का लागि भतिज हुँ भन्दै आएका एक युवकले काकालाई लिएर गएका थिए ।
मृतकका भतिजा र अर्काबिरूद्ध सीएमओको तहरीरमा महामारी ऐन र अन्य धारा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बलरामपुरको भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल भयो । त्यसमा दुईजनालाई राप्ती न’दीमा ला’श फ्याँ’कि’रहेको अ’वस्थामा देख्न सकिन्छ । त्यसमा एक व्यक्तिले पीपीई किट पनि लगाएका छन् । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रान्त सह–मन्त्री अभिषेक सिंहले भाइरल भिडियो ट्वीट गरेका हुन् ।
सीएमओ डा. विजय बहादुर सिंहले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि एल टुमा भर्ना मनकौरा काशीराम गाउँका ६८ वर्षीय कोरोना संक्रमित प्रेमनाथ मिश्रको शुक्रवार साँझ मृत्यु भएको थियो । परिवारलाई जानकारी दिन कोशिस गरियो, तर फोन बन्द थियो ।
मानकौरा काशिराम निवासी सञ्जय शुक्लाले शनिबार दि’उँसो ला’श लि’एर गएका हुन् । सञ्जयले आफूलाई प्रेमनाथको भतिज भनेर पहिचान गराएका थिए । एल टूका डा. एपी मिश्राका अनुसार सञ्जयले ला’शलाई बौ’द्ध स’र्कि’टको राप्ती खोलासम्म लैजानका लागि एम्बुलेन्स माग गरेका थिए । केही व्यक्तिहरू स्कार्पियो कारमा ब’सेर’ ला’श लि’न आ’ए । एम्बुलेन्स चालकलाई ‘ला’श रा’प्ती खो’लास’म्म लैजाने अनुमति दिइयो ।
सीएमओका अनुसार मकौरा काशिराम निवासी सञ्जय शुक्ला र एक अन्यको बिरूद्ध शनिबार साँझ को’तवा’ली गाउँमा महामारी ऐन र प्रकोप व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ । इन्चार्ज विद्यासागर वर्माले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।